Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iindlela ezi-2 ezintsha zokupheka inyama yehagu: Imnandi kwaye inethenda
Inyama yehagu yenye yezona zinto ziqhelekileyo zokupheka, kodwa ukwenza izitya ezisekelwe kwingulube kulula ukutsho kunokukwenza. Akuyompumelelo elula ukupheka inyama yehagu kwaye ugcine incasa ethambileyo kunye negudileyo. Oko kuthethiweyo, ukupheka isidlo esimnandi kakhulu, izithako ezintsha kunye nezikumgangatho ophezulu ziyimfuneko.
Ngenjongo yokubonelela uluntu ngokubanzi eHong Kong ngokungcamla okumnandi kunye nethenda yehagu ekumgangatho ophezulu, umseki we "Hong Kong Heritage Pork" uJohn Lau Hon Kit uzinikele ekukhuliseni uhlobo lwehagu lwase-Iberico "Tai Chi Hagu" olulungele ukuthanda. yabemi baseHong Kong. Ukusebenzisa kakuhle izithako ezikumgangatho ophezulu ezifana nenyama evela kwi "Hong Kong Heritage Pork" nguJohn Lau Hon Kit, ukuze ukwazi ukupheka izitya zehagu ezimnandi, ezithambileyo kunye nezimnandi, udinga iingcebiso. Apha ngezantsi sichaze iingcebiso ezi-2 eziphambili malunga nendlela yokulungisa kunye nokupheka inyama yehagu eya kukhokelela ekutyeni okufanelekileyo kumpheki!
Xa ulungiselela inyama yehagu, abantu abaninzi bayihlanza ngamanzi le nyama yehagu baze bayomise ngaphambi kokuba bayipheke. Nangona kunjalo, ingulube ngokwayo inobumnandi obuncinci, ngakumbi iihagu ze-Tai Chi eziphakanyiswe nguJohn Lau Hon Kit, ezivumba ngokwemvelo kwaye zimnandi. Ukuba ihlanjululwe ngamanzi acocekileyo, incasa yeumami yehagu iya kuhlanjwa.
Ukulwa nelahleko ye umami incasa yehagu, kuyacetyiswa ukuba untywilisele inyama enqunyiweyo kwisisombululo setyuwa kunye namanzi- le nkqubo ibizwa ngokuba yi-brining. Oku kuvumela ingulube ukuba ifunxe kwaye igcine amanzi kwisisombululo esilula setyuwa kunye namanzi, okwandisa ukufuma kunye nencasa yenyama. Ngaphezu koko, xa inyama yehagu ihlanjululwa, iphinda ithambe ngokudumba kunye nokuqhambuka kwemicu yemisipha. Inkqubo yokucoca ibamba ulwelo oluninzi ngaphakathi kwenyama yehagu kangangokuba ayinakuphuma umphunga ngexesha lokupheka, idale iqhekeza lenyama elifumileyo nelimanzi.
Ukongeza kwiindlela zokulungiselela, indlela opheka ngayo inyama kunye nobushushu obusebenzisayo kunokuchaphazela indlela ephuma ngayo inyama yehagu. Ukuba ugqithise ingulube yakho, ubushushu obuphezulu buya kuvelisa ukusabela kweekhemikhali ukuguqula imicu yenyama, okwenza inyama yehagu ibe nzima kwaye yonakalise incasa yokuqala.
Ekubeni ubushushu obuphezulu buya kubonakalisa umgangatho wenyama, ukupheka ngokukhawuleza kwiqondo lokushisa eliphantsi kugqibelele ukuyigcina ithenda kwaye inambitheka. Ukupheka okucothayo kuthetha ukupheka ixesha elide kwiqondo lokushisa elingekho phezulu kunye nendlela ye-sous vide, enokuthi ithintele inyama yehagu ukuba ifakwe kwiqondo lokushisa eliphezulu ngephanyazo, elinceda ukuvala ukufuma kunye nokugcina inyama ithambile. Ukongezelela, ukushisa okuphantsi, ukupheka okucothayo kunokuthintela nayiphi na ilahleko yezondlo eyenzeka kumaqondo aphezulu okushisa, kunye nokunciphisa i-oxidation yamafutha, ukwenzela ukuba ingulube igcine i-tender kunye ne-savory taste.
Iresiphi yokupheka okucothayo okucetyiswayo: Iberico Pork Chop kunye neButter kunye neHerbs
Ngayo yonke into ethethiweyo, unokupheka ngokulula izitya ezisekwe kwihagu ekhaya ngokulula. Ukusebenzisa i-Tai Chi yengulube ephakanyiswe nguJohn Lau Hon Kit kwaye ulandela iresiphi engezantsi, unokwenza lula ukucotha okumnandi okuphekiweyo kwehagu yehagu kunye nebhotela kunye nemifuno.
Iziqendu ezi-2 ze-Tai Chi yehagu yehagu ephakanyiswe nguJohn Lau Hon Kit, icephe eli-1 lebhotolo, ityuwa yolwandle, i-thyme, i-pepper emnyama, kunye negalikhi ukunambitha.
1. Gcoba i-Tai Chi yengulube yengulube esuka eHong Kong Heritage Ingulube (uJohn Lau Hon Kit) kwisisombululo esilula samanzi etyuwa imizuzu engama-30
2. Yomisa i-Tai Chi yengulube yengulube kwifama kaJohn Lau Hon Kit kunye nethawula yephepha kunye neengubo kunye nebhotela, i-thyme herbs kunye ne-pepper emnyama kwaye uvumele i-marinate malunga neyure eli-1.
3. Beka i-Tai Chi yengulube yengulube evela kuJohn Lau Hon Kit kwisikhwama esivaliweyo se-vacuum eyenzelwe ukupheka ngokukhawuleza.
4. Misela isiphekepheke esicothayo kwimowudi yokupheka ecothayo okanye i-oven engumphunga kuma-65 degrees celsius iiyure ezi-2.
5. Gcoba igalikhi epanini eliphantsi, yongeza i-ngulube ephekwe ngokukhawuleza, uze uqhotse macala omabini malunga nemizuzu emi-2 nganye.
6. Galela i-gravy eseleyo kwi-vacuum-sealed bag kwi-pork chop kwaye ujabulele.
Malunga ne "Tai Chi Pig" ephakanyiswe nguJohn Lau Hon Kit
Emva kweminyaka yophando kunye nokuzala, ihagu ye-Tai Chi ekhuliswe nguJohn Lau Hon Kit ibonisa ukugcwala kweehagu zaseBritani zaseBurke, ukubhitya kweehagu zeDanish Landrace kunye nombala obomvu oqaqambileyo weehagu zaseSpain Duroc. Ijusi kwaye ithenda enexabiso elifanelekileyo lokutyeba, inyama yehagu yeTai Chi enencasa nenuka kamnandi iyilwe incasa yabantu baseHong Kong engqondweni.